ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for ရန်ကုန် ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 28 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန် | အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုုးအစား | $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Senior Sales Assistant(Wholesales) -4Posts (Female) for Zin Htet Trading Co.,Ltd
Must have at least3years of relevant sales experiences. Able to implement established marketing plan. Must be able to work actively and professionally in the sale of building materials (Wholesales).Must be using computer .Must have good interpersonal and teamwork skills.
အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ 28
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း 1 မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း2ဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်း 1 ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း5ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း2နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း2ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း3လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 10 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 2
Expats Preferred6Repats Preferred 3